Axmed Mido - RBN NEWS
Home»Author: Axmed Mido
Author: Axmed Mido
By Axmed Mido June 14, 2022 0
Dowladdaha Mareykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa wada hadal xooggan ka yeeshay daandaansigii dhawaan ee kuuriyada Waqooyi ee ku aadana tijaabadii Nukliyeerka. Antony Blinken ayaa kulan xasaasi ah waxa uu la qaatay wasiirka arrimaha dibada ee dalka kuuriyada koonfureed ee Park Jin waxayna si wada jir ah uga wada hadleen waxa ay ka yeelayan, tijaabooyinka uu kuuriyada waqoyi uu sameynayo ee ku aadan hubka Nukliyeerka. arrintan ayaa u muuqata mid halis ku ah gobolka iyagoo labada dhinac ay si aad ah u falanqeeyeen halista uu gobolka ka abuurayo kuuriyada waqooyi.
Dowladda Britain ayaa qorsheynaysa inay Rwanda u dirto diyaaraddii ugu horreysay oo sidday magan-galyo-doon ku guul-darreystay inay aqoonsi ka helan Britain. Diyaarad la soo kireystay ayaa habeen hore ka dhoofi lahayd mid ka mid ah garoomada diyaaradaha ee London oo ay ku degi lahayd Kigali , ololayaal ayaa sheegay, ka dib markii garsoorayaasha UK ay diideen racfaan laga qaatay masaafurinta. Dacwoodayaashu waxay ku doodeen in go’aanka siyaasadda ay ahayd in la sugo ilaa dhageysi buuxa laga gaarayo sharcinimada siyaasadda bisha soo socota. Soddon iyo kow muhaajiriin ah ayaa lagu waday in la diro laakiin mid ka mid ah dadka sheeganaya,…
By Axmed Mido June 12, 2022 0
Real Madrid ayaa dhameystirtay saxiixa xiddigii kooxda Monaco Aurelien Tchouameni kaasi oo ay ka saxiixden heshiis 6 sano ah kaaso Bernabeu kusii heyn doonta June 2028. Kooxda heysata Laliga iyo Champions League ayaa saxiixa xiddigan ku gaaracday kooxaha Paris Saint Germain iyo Liverpool. Tchouameni ayaa la filaya in lasoo bandhigo Taladaada soo aadan isago haatan u mari doona kooxda Real Madrid caafimaadka.
Hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa Axadii taageero buuxda u muujiyay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, in kasta oo beesha caalamku cambaaraysay duullaanka joogtada ah ee Moscow ee Ukraine. Dadka Ruushku waxa ay guulo waaweyn ka gaadheen xaqiijinta xaqa ah ee difaaca sharafta iyo ammaanka dalkooda, iyaga oo ku dhiirranaya dhammaan noocyada caqabadaha iyo dhibaatooyinka,” ayay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ee KCNA qortay maanta. “Dadka Kuuriya waxay u fidinayaan taageero buuxda iyo dhiirigelin dadka ruushka.” Tilmaanta muuqata ee Kim ee ku aaddan weerarka aan loo meel dayin ee ka dhanka ah Ukraine oo ah “sabab xaq ah” oo lagu difaacayo…
Dadka Faransiiska ah ayaa u codeynaya doorashada baarlamaanka xilli madaxweyne Emmanuel Macron uu doonayo in uu helo aqlabiyaddiisa xilli ay sii kordhayso khatarta ka imaanaysa isbahaysiga bidix. In ka badan 6,000 oo musharrax oo da’doodu u dhaxayso 18 ilaa 92 jir ayaa u tartamaya 577 kursi oo ka tirsan baarlamaanka qaranka wareegga koowaad ee doorashada. Kuwa hela codadka ugu badan ayaa u gudbi doona wareegga labaad ee muhiimka ah 19-ka June. Ka dib doorashadii ku celiska ahayd ee Mr Macron bishii May, isbahaysigiisa dhexe waxa uu raadinayaa aqlabiyad buuxda oo u sahlaysa in uu fuliyo ballamihiisii ololaha, oo ay ku…
By Axmed Mido June 11, 2022 0
Sergej Milinkovic Savic ayaa lala xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo horyaalka Ingiriiska muddo dheer kaasoo mar Ku hungoobay inuu u dhaqaaqo marar badan. Arsenal ayaa hadda ka shaqaynaysa sidii ay u hubin lahayd inay u dhaqaaqdo xagaagan xidigan halista badan. Mikel Arteta ayaa kooxdiisa dib ugu soo celiyay Yurub waxayna haatan isha ku hayaan in ay wax walba u dhacaan sidii loogu talagalay iyaga oo keenaya ciyaartoy cusub oo kooxda ku xoojiya. Sergej Milinkovic Savic ayaa loo arkaa mid ka mid ah bartilmaameedyadan taas oo dhici karta maalmaha soo socda iyaga oo diyaar u ah in ay la kulmaan qiimaha ay…
LAYAAB: Nin 40 Sano Ku Dhex Noola Dambiil
Dominico oo 60 jir ah 40-kii sano ee lasoo dhaafay noloshiisa, wuxuu ku qaatay uu dhex seexanayay waxna ku cunayay dambiil ay farsameeyeen waalidkii oo da’ ah.Ninka naafada ah ayaa la sheegay inuu ku socon karin lugaha iyo gacmaha ka dib xanuunno yaab leh oo isdaba-joog ah oo helay. ubad waliba waa qaasab markuu waalidkiisa gabowo inay daryeelan, balse ninkan waa uu ka duwan yahay taas, arintiisana waa mid murugo leh. Dominico aabihiis oo 88 jir ah iyo hooyadii 81 jir ah ayaa quudiya oo daryeela isaga maalin kasta sababtoo ah waa naafo. 60-jirkan oo ah wiilkoodii ugu horreeyay ayaa…
Barcelona Ayaa Diiday Dalabkii Ugu Horeeyay Ee Ay Manchester United Ka Gudbisay Frenkie de Jong
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay dalab 60 milyan ginni ah ka gudbisay xiddiga khadka dhexe ee Frenkie de Jong kaas oo ay Barcelona diiday.Ka dib bixitaankii Paul Pogba, Nemanja Matic, Jesse Lingard iyo Juan Mata, Macalinka cusub ee Erik ten Hag ayaa isha ku haya inuu xoojiyo khadkiisa dhexe xagaagan, iyadoo De Jong la rumeysan yahay inuu yahay bartilmaameedkiisa koowaad. Red Devils ayaa la fahamsan yahay inay miiska u saartay dalabkeedii ugu horreeyay ee 25 jirkaan horaantii isbuucaan, laakiin Daily Mirror ayaa sheegeysa in dalabkaas ay soo diiday kooxda reer Catalan. Weli waxaa jira heer ay United rajo…
By Axmed Mido June 8, 2022 0
Tareen rakaab ah ayaa qayb ahaan ka goostay bariga Iran subaxnimada Arbacada ah, waxaana ku dhintay ugu yaraan 10 rakaab ah 50 kalena waa ay ku dhaawacmeen, qaar ka mid ah ayaa aad u liita, sida uu sheegay TV-ga qaranka. Warbixinta ayaa lagu sheegay in tirada dadka ku dhintay ay sii kordhi karto, inkastoo faahfaahinta hordhaca ah ee ku saabsan musiibada aysan weli cadeyn. Kooxaha gurmadka ee ambalaasyada iyo saddex diyaaradood oo helicopter ah ayaa gaaray meel fog oo isgaarsiintu aad uga liidato. Shilka ayaa ka dhacay meel 50 kiiloomitir (30 mayl) u jirta Tabas, oo qiyaastii 550 kiiloomitir (340…
Pogba: Waxaan Doonaya Inaan Degnaan Ku Dareemo Kooxdan Ku Biirayo
Paul Pogba ayaa daaha ka qaaday in uu doonayo in uu “deganaan ku dareemo kooxdiisa xigta” ka dib markii uu ku dhawaaqay go’aanka uu kaga tagayo Manchester United xagaagan.29-sano jirkaan ayaa si rasmi ah uga tagi doona Old Trafford marka uu qandaraaskiisu dhaco June 30, wuxuuna awood u yeelan doonaa inuu kala xaajoodo inuu si xor ah ugu biiro koox kale. Kooxdii hore ee Pogba ee Juventus iyo sidoo kale Real Madrid iyo Paris Saint-Germain ayaa la aaminsan yahay inay yihiin saddexda kooxood ee ku dagaalami doona saxiixa xiddiga khadka dhexe xagaagan, laakiin xiddiga reer France ayaa ku adkaystay inuu…